प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम,आम जनता भने यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको देखिएको छैन किन ? – " कञ्चनजंगा News "
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम,आम जनता भने यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको देखिएको छैन किन ?
No Comments on प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम,आम जनता भने यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको देखिएको छैन किन ?
६ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम देशभर चलिरहेको छ । सरकारले यसलाई ठूलो उपलब्धीको रुपमा लिए पनि आम जनता भने यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको देखिएको छैन ।
रोजगारी सिर्जना गरेर जनताको जीवनस्तर माथि उकास्ने यसको उद्देश्य भए पनि बजेटको सही ठाउँमा उपयोग नहुँदा यसको प्रभावकारीता सन्तोषजनक छैन । रोजगार कार्यक्रमको बजेट सडक नाली सफा गर्ने, झार उखेल्ने लगायतका काममा खर्च गरिएको भन्दै यो कार्यक्रमको मजाक पनि उडाइएको छ ।
अर्थविदहरु पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट अर्बौं रुपैयाँ दुरुपयोग भइरहेको बताउँछन् । यता श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने कार्यक्रम धेरै ठाउँमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन भइरहेको दावी गर्छन् ।
केही स्थानमा स्थानीय तहले राम्रोसँग कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्दा केही समस्या देखिएको उनीहरुको तर्क छ ।
तर, विज्ञहरुले कार्यक्रमको मोडालिटीमै प्रश्न उठाएका छन् । रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बनाइएको ‘कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६’ मा नै सरकार चुकेको टिप्पणी गर्छन्, पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल ।
‘यसै पनि कार्यक्रम बनाएर लागू गर्न जेठसम्म कुरियो, त्यसमाथि सामान्य सरसफाइका काम गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई पैसा बाँड्ने गरी मोडालिटी ल्याइयो,’ उनले भने, ‘यो मोडलले कुनै पुँजी निर्माण हुँदैन, रोजगारी सिर्जना पनि हुँदैन, सीधै बेरोजगार भत्ता बाँड्न नमिलेपछि यस्तो मोडल ल्याएर रकम दुरुपयोग गरिँदैछ ।’
← एस्तो ठाउँ जहाँ आमा कमाउनलाई विदेश जान्छिन् तब छोराछोरी र घरको जिम्मेवारी श्रीमान्ले लिन्छन् → आजको दिन वर्षकै लामो दिन